RASMI: Tababarihii bartilmaameedka u ahaa Chelsea ee Erik ten Hag oo heshiiska u kordhiyey kooxda Ajax – Gool FM
(Amsterdam) 20 Juunyo 2019. Tababare Erik ten Hag ayaa heshiis cusub oo saddex sanadood ah u saxiixay Ajax, kaasoo kooxda ku sii hayn doona illaa bisha June sanadka 2022-ka.
Kooxda Ajax ayaa heshiis kordhin u sameysay macallinkeeda kaddib markii uu ku hoggaamiyey horyaalka Holland, isla markaana uu kooxda gaasiiyey afar dhammaadka tartanka Champions League.
Erik ten Hag ayaa loo magacaabay xilka kooxda bishii December sanadkii 2017-kii, waxaana uu kooxda u qaaday horyaalka Holland isagoo la tagay semi-finalka Champions League.
Kooxda uu hoggaamiyo 49-sano jirkaan ayaa tartanka Koobka Horyaallada Yurub ee Champions League ka reebtay kooxaha Real Madrid iyo Juventus, ka hor inta aysan guuldarro kala kulmin Tottenham afar dhammaadkii tartankan.
Tababare Ten Hag waxaa muddooyinkii dhowaa uu ka mid ahaa macallimiinta ay bartilmaameedsanaysay kooxda Chelsea ee Ingiriiska kuwaasoo tababareyaasha ay suuqa ka doonayaan ku darsaday Erik ten Hag si uu bedel ugu noqdo booska uu ka baxay Macallin Maurizio Sarri oo ku biiray Juventus.
The Blues ayaa iska ilaawi doonta haatan Erik ten Hag, maadaama uu heshiis cusub oo saddex sanadood ah qalinka ugu duugay kooxdiisa Ajax, waxaana ay u weecan doonaan halyeygooda Frank Lampard si ay uga dhigtaan macallinkooda cusub.